सरकार संस्कृति र पर्व लोप गराउन लाग्यो-डिला संग्रौला | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
सरकार संस्कृति र पर्व लोप गराउन लाग्यो-डिला संग्रौला
नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले तीज जस्तो नारीका लागि विशेष पर्वको महत्व घटाउन सरकार लागिपरेको आरोप लगाएकी छिन् । ऋषि धमलासँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि कुराकानी गर्दै उनले नारीको हकअधिकारका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार नभएको समेत बताइन् । उनीसँगको कुराकानीः
तीज एउटा गीत गाउनुस् न त आज ?
मलाई गीत त गाउँन आउँदैन । तीजको रहर आयो बरिलै ।
गीत गाउँन आउँदैन दिदी, बहिनीहरुसँग नाचगान गर्नुप¥यो नि ?
अर्को गीत छ सानै विवाह हुने माइत जान नपाउने चेलीको लागि छ । वर्ष दिनको तीजमा सबै जान्छन् माइत, मै चेली अभागिनी कसका माइत जाम, भनेर आपूmभित्र दुःख, पीडा पोख्ने माध्यम थियो । त्यो गीत हामी साना हुँदा आमाहरु गाएको सम्झना छ ।
आमाले पनि गीत गाउँनुहुन्थ्यो ?
गाउँनुहुन्थ्यो । त्यसबेला यस्तो खालको गीत थियो । अहिलेको बेग्लै छ । त्यस बेला महिलामाथि घरेलु हिंसा पनि ब्याप्त थियो । त्यसको गुनासो गर्ने फोरम तीज हुन्थ्यो । जहाँ वर्षभरीका दुःख, पीडा पोखिन्थे गीतको माध्यमबाट । अहिलेको भन्दा धेरै विभेद थियो समाजमा । चुलीहरु भनेको बेलामा माइत जान पाउँदैनथे । अनि तीनको अवसरमा आफ्ना पीडा गीत गाएर पोखिन्थ्यो ।
तपाईं नाच्नु हुन्छ ?
नाच्न सानैदेखि पोख्त थिएँ । साना त म कलाकारै हो ।
तपाईं कलाकार पनि हो ?
हो, थुप्रै प्राइजहरु जितेकी छु कलाकारितामार्पmत ।
पछि राजनीतिमा आउनुभयो ?
राजनीतिमा त सानैदेखि रुचिको विषय । मलाई संगीत मन पर्छ । हरेकलाई संगीत चाहिन्छ । संगीतले सम्पूर्णको मन जित्छ । एउटा संगीत कित छिटो मानिसको मन जित्न सक्छ, त्यति नै राम्रो भाषणले सबैको मनमस्तिष्क छुन सक्दैन । त्यसैले तीजको अवसरमा महिला दिदी, बहिनीहरुले आफ्ना पीडा, दुःख, भोगाइहरुलाई संगीतको माध्यमाट व्यक्त गर्दछन् । त्यो मलाई सान्दर्भिक हो भन्ने लाग्छ ।
नेपाली महिलाहरुमा तीज कस्तो महत्व छ ?
एकदमै ठूलो महत्व छ । हरितालिका तीजको महत्वको बारेमा भन्नुपर्दा पार्वतीका बिताले विष्णुसँग विवाह गरिदिन खोजेको बेलामा त्यहाँबाट भागेर महादेवी पति पाऊँ भनी कठोर पतस्या गरेपछि महादेवसँग उनको प्रेम विवाह भएको थियो । यहाँ हरित भनेको हरण गरिएको साथीबाट हरण गरिएकी । तालिका भनेको साथीहरु हो । यस वर्षमा निर्भmर ब्रत बसेर परिवारको श्रीमानुको सुखशान्ति र दीर्घायुको कामना यसमा गरिन्छ । यसलाई धर्म, संस्कार, संस्कृतिको रुपमा मनाइन्छ । पहिला परिवारको मात्रै कामना हुन्थ्यो भने आजको तीजमा हरेक दिदी, बहिनी, आमाले आफ्नो घर परिवारमात्रै नभएर सम्पूर्ण देशवासीको सुखशान्तिको कामना गरेको पाउँछु । किन भने तीजको कार्यक्रममा १५ दिनसम्म बाहिरी जिल्ला डुलेर भरखर काठमाडौं आइपुगेकी हुँ ।
आज ब्रत बस्नुभएको छ ?
आज पनि तीजकै कार्यक्रम लिएर बाहिर जाँदैछु ।
ब्रत चाहिं श्रीमान्को लागि हो ?
एक दिन ब्रत बस्नु स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हो । यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ त्यही रुपमा म यसलाई लिन्छु ।
हाम्रो देशको रिती, रिवाज, संस्कृति त लोप हुँदै गयो नि ?
हो, लोप हुँदै गएको छ । मैले धैरै ठाउँमा यो कुरा उठाउने गरेको छु । यसअघिका सरकारले बन्देज लगाएको थिएन । अहिलेको सरकारले तीजलाई भडकिलो, खर्चिलो भएको निहुँमा बन्देज लगाएको छ । महिलाहरुसँग कहाँबाट पैसा हुन्छ कार्यक्रम भड्किलो, खर्चिलो हुन्छ । यो खाली पर्वको महत्व घटनाएर लोप गराउने काममा सरकार नै लागेको देखिन्छ । यसरी बन्देज लगाउनु भनेको हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृतिमाथि लगाइएको बन्देजको रुपमा मैले दिएको छु । लोप हुनबाट जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो । तीजलाई उर्जा, जागरण, सद्भाव, खुसी अभिव्यक्त गर्ने पर्वको रुपमा मनाउनुपर्छ । मलाई मन पर्ने चाडमध्ये तीज हो । सम्पूर्ण नेपाली दिदी, बहिनीहरुमा तीजको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
काठमाडौँ, १३ जेठ : भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले
भारतको सहमतिविना सिमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान सकिदैन- टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं, १३ जेठ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपाल र भारत दुवैको सहमतिमा मात्र सिमाको
भारतले यो सरकारलाई टेर्दै टेरेन-सीपी गजुरेल
काठमाडौं, १३ जेठ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल नेपाल भारत सिमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण